Affinity Designer, tadiavo ny fifaninanana Adobe vaovao | Famoronana an-tserasera
Affinity Designer, revolisiona eo amin'ny sehatry ny endrika
Ny tsena, ankoatry ny andiana tolotra manintona ho an'ny mpanjifany dia eo ampitan'ny vola madinika tsy misy farany izany fifaninanana, asa manaraka ny toerana misy ny varotra betsaka indrindra.
Tsy misy isalasalana fa zava-misy izay mandondona na ho ela na ho haingana amin'ny vokatra isan-karazany ao anatin'ny vondrona mpandraharaha, mpivarotra na manavao, izay manery azy ireo makà fepetra henjana amin'ny fahavelomanao eny an-tsena, misafidy ny hanavao na oviana na vidiny na vokatra hafa mety haterin'ny varotra vaovao.
1 Maninona no Mpamorona Affinity
2 Adobe sy FreeHand
Maninona no Mpamorona Affinity
Ireo mpampiasa, etsy ankilany, dia ho miandry foana ny tolotra manintona indrindra, mandrisika ny mpivarotra hanavao, handray fepetra amin'ny fivarotana ny vokariny, noho izany, ho iray hatrany ny tsena varotra sy paikady fandraharahana Hiezaka mafy izy ireo hahatratra ny tanjonao amin'ny resaka varotra.
Ny tsenan'i rindrambaiko famolavolana, tsy afa-miala amin'ity zava-misy ity ary mitombo ny teknolojia rehefa mandeha ny andro, mamokatra fitaovana tsy dia lehibe loatra ho an'ny fiainan'ny olona sy ny hetsika isan'andro. Ity lahatsoratra ity dia hanolotra a taratra ny toe-javatra fohy amin'ny fanazavana voalaza etsy ambony.
Ao amin'ny rindrambaiko sangany eo amin'ny lafiny famolavolana sary dia nanana: Photoshop, Freehand ary Quarkorot, ka mahatonga ny tsirairay amin'izy ireo ho iray amin'ireo rindrambaiko fanovana maoderina. Na izany aza, nisy andiana hetsika izay nanjary panorama somary feno fankahalana ho an'ireo programa ireo.
Noho ny fivoarany sy ny varotra, Adobe, orinasa niomerika miadidy ny iray amin'ireo programa vaovao indrindra sy malaza eo amin'ny tsenan'ny rindrambaiko famoahana ankehitriny (Photoshop), manapa-kevitra ny hividy indray mandeha ary ho an'ny rehetra Fandaharana Freehand, toe-javatra iray nahasarika ny mpampiasa ilay rindrambaiko farany, satria nankafy ambaratonga avo ny fanantenana momba ny fivoarany mety hitranga, mialoha ny hamoahana mpampiasa marobe erak'izao tontolo izao.
Gaga ny mpampiasa, hafa tanteraka noho ny nandrasana ny panorama ary izany ve ilay orinasa adobe dia tsy nandray anjara tamin'ny fampandrosoana ny programa Freehand, namela azy io ho an'ny fotoana be dia be, izay niafara tamin'ny famoahana Freehand kinova izay tsy nanao afa-tsy ny niteraka tsy fahafaliana tamin'ny mpampiasa azy, noho ny hadisoana be dia be naterin'ilay kinova vaovao, mazava ny toerana misy ny adobe alohan'ny mpampiasa FreeHand: Avelao hirehitra ny programa, amin'izay dia hofoanana ny fifaninanana mety hitranga indrindra eo amin'ny tsena.
Adobe sy FreeHand
Vokatr'izany, mety ho mpampiasa an'i Freehand dia tao anatin'ny fahasosorana lava, noho ny fatran'ny plugins sy fanavaozana voafetra ho an'ny programa misy eo amin'ny Internet. Tampoka teo, nisy vondrona mpamorona rindrambaiko nandray an-tanana ny raharaha, namolavola tetikasa vaovao ho an'ny tsenan'ny famolavolana, antsoina Affinity Designer, programa famolavolana manana fahaiza-manao sy fahaizana avo lenta ho an'ireo mpampiasa nostalgic ho an'ny Freehand.
Ity programa vaovao ity, maneho ny fifaninanana mety hitranga vaovao eny an-tsena manohitra ny adobe, izay midika hazakazaka vaovao ho an'ny toeran'ny rindrambaiko mahomby indrindra ho an'ny famolavolana. Lafiny iray manasongadina ny fampifanarahana aloha ny Affinity Designer. Ary io dia amin'izao fotoana izao, io dia tsy miasa afa-tsy amin'ny sehatra MAC, izay nisolo tena ny famerana ny tsenany. Na izany aza, io fetra io dia vetivety ihany, satria, rehefa mandeha ny fotoana, miditra ao amin'ny antony vaovao ny sampan'ny mpamorona: Affinity Designer ary tsy namela na inona na inona afa-tsy ny fanisana ny lazan'i Adobe Photoshop amin'ny fisoratana anarana ny programa famolavolana.
Ity dia iray amin'ireo scenario an-tapitrisany maro iainan'ny tsena isan'andro, avelany ireo izay tsy afaka manavao, ireo izay tsy afaka miaina mandritra ity fifaninanana eritreritra mety hitranga ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Affinity Designer, revolisiona eo amin'ny sehatry ny endrika
SOSO-KEVITRA dia hoy izy:
"Ary amin'izao fotoana izao, ity dia tsy miasa afa-tsy amin'ny sehatra MAC," -> Diso;)
Na mbola tsy nanao ny fikarohana nataonao ianao, na ity lahatsoratra ity dia mifototra amin'ny loharano efa lany andro, satria samy misy ny Affinity Designer sy ny Affinity Photo dia hita ao amin'ny Windows hatramin'ny 15 martsa farafaharatsiny, na tsia aloha kokoa.
Ny tsy tsiambaratelo nataon'i Andriamatoa Wonderful: ny fanoratany